घिउकुमारी पायल्सको उपचारका लागि अमृत समान... यसरी गर्नुहोस् प्रयोग - ।। Naya Kuro ।।
२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:२८ November 6, 2020 Naya KuroLeaveaComment on घिउकुमारी पायल्सको उपचारका लागि अमृत समान… यसरी गर्नुहोस् प्रयोग
पायल्स रोगका बिरामीहरु दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छन् । दैनिक खानपानमा ध्यान नदिँदा यस्तो रोगको जोखिम झन बढ्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । क’ब्जियत नै पा’यल्सको मुल कारण हो । जब क’ब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ । त्यही बलले भित्रका र’क्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ । यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ । पा’यल्सका कारण म’लद्वार दुख्ने वा पोल्ने हुन्छ ।
एक दिनमा ३–४ पटक म’लद्वारमा बदामको शुद्ध तेल लगाए आराम मिल्छ । काँचो केरा उसिनेर बिहान–बेलुका खाँदा पनि पा’यल्स रो’गीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । पा’यल्सका रो’गीले तारेको/भुटेको तथा रेशारहित खाना खानु हुँदैन । क’ब्जियत हुन नदिन रे’सा युक्त (फाइबर) खाना प्रशस्त खानुपर्छ । अलिभ (जैतुन)को तेल लगाउँदा पा’यल्सका विरामीहरुका लागि आराम मिल्छ ।
मूलाको रस बिहान बेलुका खाँदा पा’यल्सका रो’गीलाई फाइदा हुन्छ । आँपको कोयाको गुदीको चूर्ण महसँग मिसाएर खान सकिन्छ। दिसा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास ल’क्षण हो । मलाशयमा भारीपन हुने, दि’सा राम्रोसँग नहुने, दु’ख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन् । जति जति रो’ग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दुखाई बढी हुन्छ । गुद्वारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ । क’ब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ । किनभने अपच हुने खाने कुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्या’केटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जंक फूड, मसलेदार, मासुजन्य खानेकुरा क’ब्जियतको कारण बन्छ ।
अनियमित खानपान पनि यसको कारण हुनसक्छ । जस्तो कि भोक लागेको बेला नखाने, राती अबेर खाने, आवश्यक्ताभन्दा बढी खाने बानीले क’ब्जियत रो’ग पैदा गर्छ । त्यस्तै दिसा रोक्ने बानी अर्को कारण हो । स्व’स्थ्य खानपान र जीवनशैलीले यस्तो समस्या निवारण गर्न सकिन्छ । पा’यल्सको समस्या छ भने चाहि त्यसको प्रकृति अर्थात श्रेणी अनुसार उपचार विधि अपनाउनु पर्छ । सामन्य स्थितिमा खान पान, जीवन शैली, व्या’याम आदिबाट यसको निदान खोज्न सकिन्छ । पा’यल्स भएको अवस्थामा बो’सोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मा’सुजन्य, दुधजन्य, मैदाबाट बनेका, कार्बोनेटेड ड्रीकं आदिको सेवन गर्नु हुँदैन । म’दिरापान, धु’म्रपानले पनि यसलाई जटिल बनाउँन सक्छ ।
१. प्रसस्त समय घाम ताप्नुहोस् जसले थकान महसुस गराउछ र राती निन्द्रा लाग्दछ, साथै घामबाट प्रसस्त मात्रामा भिटामिन डि पाइन्छ । २. दैनिक व्यायम गर्ने , हिडडुल गर्ने । चाडै सुत्ने र चाडै उढ्ने बानी बसाल्ने । ३. बेलुका ४ बजे पछि चिया ,कफी एनर्जी ड्रिक तथा पिय पर्दाथ खान छोड्नुहोस् ।
यसमा प्रशस्त मात्रामा क्याफिन पाइन्छ । एक सय ग्राम कोफिनमा ४० मिलि ग्राम क्याफिन पाइन्छ । त्यसले निन्द्रा भगाउने काम गर्दछ । ४. खाना खाने वित्तिकै सुत्ने बानी छ भने यसलाई छोड्नुहोस् , जसले शरीरलाई नकारात्मक असर गर्दछ । खाना खाएको कम्तीमा २ घण्टा पछि सुत्ने वानी बसाल्नुहोस् ।
५. राती चाडै ओछ्यानमा जाने बानी बसाल्नुहोस् जसले निन्द्रा लाग्न मद्धत गर्छ । ६. सुत्ने समय एउटै बनाउनुहोस् । जसले गर्दा हाम्रो मष्तिस्कलाई सुत्ने र उढ्ने समय थाहा पाउछ । ७. बेलुकी सधैं मुख धुने , दाँत माज्ने बानी बसाल्ने , सुत्दा सधैं आफुलाई उपयोगी किताब पढ्ने बानी बसाल्ने । ८. आफु सुत्ने ओछ्रयान सधैं सफा चिटिक्क पारे राख्ने बानी बसाल्नुहोस् । ९.सुत्ने बेलामा मष्तिस्कलाई कुनै पनि तनाव नदिने , सुत्ने बेलामा कहिल्यै मसलेदार खाना खानु हुँदैन ।
मसलेदार खानाले शरीरलाई हिट दिन्छ र पाचन तन्त्र पनि रात भरी सक्रिय गराइदिन्छ । १०.सुत्नु भन्दा १ घण्टा अगाडी दुधमा अलिकती जाइफलको धुलो हालेर खानुहोस् । यसको अलवा दालचिनीको धुलो राखेर दुधमा खादा नि गहिरो निन्द्रा लाग्दछ । २० ग्राम जाइफल प्रयोग गरियो भने यसले ३६ घण्टा सम्म निन्द्रा लाग्छ । पाचन किड््रनीको लागी राम्रो गर्छ ।
११. सुत्ने बेलामा केरा खाने गर्नुहोस् । केरामा पोटासियम , म्याग्नेसियम , भिटामिन बी ‘6’ पाइने गर्छ ।१२. पुदिनाको अचार, चिया खाने । १३.सेतो चना खाने , यसमा पोटासियम पाइन्छ ।१४.हरियो सागसब्जी खाने, चिल्लो रहित दही खाने ।
१५ सुत्ने बेलामा किबी फल, बदान ५-६ खाने । १६.मह खाने यसले मष्तिस्कमा रहेको सेरेटोनिकलाई सन्तुलनमा राख्न मद्धत गर्दछ । १७ सुने बेलामा सधै. शरीरलाई राम्ररी मालिस गर्नै बानि बसाल्नुहोस् । तर सबैलाई ८ घण्टा सुत्नुपर्छ भन्ने छैन ,कोही ५ घण्टा सुतेर नि स्र्फुत हुन सक्छन् । यदि कसैलाई डि’पे्रसन छ भने डाक्टरको सल्लाह बमोजिमको औषधि सेवन गर्नुपर्दछ । source:Narayani Pation
६ असार २०७७, शनिबार २०:२८ June 20, 2020 Naya Kuro
रगत अभाव भएपछी सेना र प्रहरीका जवानहरुले रक्तदान गर्न थाले
१८ चैत्र २०७५, सोमबार ०९:२३ April 1, 2019 Naya Kuro